E14 LED Isibani: izici eziyisisekelo
Ikhaya Nomkhaya, Izesekeli
E14 isibani LED ingenye models ethandwa kakhulu yonke imikhiqizo athuthukile ngokusekelwe LED ukukhanyisa ubuchwepheshe. Kuyinto enye esihle ukuze izibani ezivamile incandescent futhi umncintiswano LED izibani okuhle. Ngenxa ukonga ukusetshenziswa kwamandla kagesi, ukuphila isikhathi eside futhi ukukhanya okukhulu izibani enjalo ngokwethukela ukubonwa njengomthombo oyinhloko yokukhanya ababhemayo izinjongo ezihlukahlukene.
Fields of kwesicelo
Iso lomuntu iyaphendula engcono elangeni. Ngakho-ke, kulapho ukukhanya wukukhanya i Isibani sikagesi, eduze zemvelo, uyokhululeka ngokwengeziwe imizwa lwethu kosuku olude ukusebenza. Lokho isibani kwaholela LED E14, sibonga ukukhanya zawo ezithambile, ivumela ukuba kakhulu ukunciphisa iso umthwalo ngakhoke ukuvikela umuntu kusuka ukukhathala.
Ukudalwa jikelele ukukhanyisa izicelo ezindaweni okuhlalwa kuzo, inhlangano eziyinkimbinkimbi zezimboni, oluphuthumayo kanye emgwaqweni ukukhanyisa, wasebenzisa njengoba imililo ekuvikeleni, ukudalwa izinhlobo ezahlukene ukukhanyisa - kuzo zonke lezi zindawo kungaba kahle ukusebenzisa energy esisindisa LED izibani E14.
Namuhla LED isibani E14, intengo zazo zokhahlamba kusuka ruble 100 kuya ku-150 etholakalayo abathengi ngobuningi. Lezi izibani ezifakiwe ngamaketanga cishe zonke ezinkulu okudayisa, izikhungo zomphakathi kanye nokuzijabulisa. Osomabhizinisi aqonde ukuthi ushibhile ukufaka LED ukukhanyisa ngemali eyamukelekayo, kwesisodwa futhi umthwalo ngokwakho yesondlo okuqhubekayo futhi esikhundleni izibani ezivamile incandescent.
E14 isibani LED: izilungiselelo
LED kwagezi isibani E14 izici ezilandelayo:
uhlobo isizinda: E14;
yokusebenza voltage: 220V;
Ukuvutha: efudumele 3200 K;
izinga lokushisa lomzimba esimweni ukusebenza: 40 ° C;
ukuphila: Balinganiselwa ku 50 000 amahora;
Ukukwazi ukulungisa ukugqama.
Izinzuzo LED ama E14
Isibani LED E14 7W ithuthukiswe innovative analog ejwayelekile esikhipha isibani uhlobo E14 cap, futhi bakwazi ukuncintisana ne ngaphambili okwandile Fluorescent ukukhanya imithombo.
Izinzuzo esemqoka izibani LED kuqhathaniswa oshiwo ngenhla ukukhanyisa ubuchwepheshe yilezi:
Ukusetshenziswa kwamandla ngaphansi.
Ukuba khona nje engela ngqo bakhazimula akunamthelela isithunzi kule kukhanyisa endaweni.
Umkhiqizo ukukhanya esiphezulu benethuba isiqondiso.
Isevisi ukuphila umxhwele ngempela ngaphandle kwesidingo esikhundleni.
Ikhono ukulondoloza yokusebenza lokushisa esitebeleni.
Ukungabi bikho izinto eziyingozi futhi izingxenye engase ibe yingozi.
Nemibi LED ama E14
Naphezu isimo ezintsha nokutholakala inombolo okubanzi izinzuzo ezisobala, njenganoma iyiphi enye ubuchwepheshe, wadala babe ngumsebenzi wezandla zomuntu, isibani LED has nezihibe. Okokuqala lapha ukunikeza nokuncipha ukusebenza futhi bungakanani ubude bokuphila lapho esetshenziswa izibani enziwe ukwehluleka yezimfuneko ukushisa ukususwa.
Ngaphezu kwalokho, ukwehliswa elibukhali impilo isevisi ye umthombo wokukhanya LED kungabonakala nasemkhakheni ezingeni lokushisa ukusetshenziswa okuqhubekayo endaweni 60 C no ngenhla.
Ekugcineni abanye ngokuphazamisa umsebenzisi kungaletha khona esikhanya kakhulu, kukhanya okuphandlayo ezimweni lapho kungekho izindlela ezikhethekile ukuhlakaza, ukulawulwa ezingeni ukukhanya izibuko zokuvikela amehlo.
Nakuba isibani LED E14 unekhono ulondoloza yokusebenza lokushisa esitebeleni, futhi ivikelwe okweqile, ukunikeza ntandokazi ukukhethwa inketho enjalo kungcono ukukhanyisa Ceramic, iphosilini abashisekeli.
Zobumba cartridges abe nokuphila isikhathi eside uma kuqhathaniswa kunemifuziselo plastic. Okuvame kakhulu cartridges Ceramic ngokuba izibani E14 kuqukathe umzimba Ceramic, exhunywe ithusi isikulufa oxhumana noma zethusi amacembe, spring iziketi, okuyinto siphendukezela cap.
Ngokuvamile kuba isiketi is element eziyinkinga kakhulu igobolondo. Ukukhetha igobolondo nge isiketi eyenziwe aluminium esithambile angabakhulula asemrarweni. I sokuhambisana metal kuholela enameva encane nge screwing futhi unscrewing kwesibani. Ngokuvamile, i-elementi chuck nje uhlala phezu isinyathelo lapho unscrewing.
E14 LED isibani ukukhonza isikhathi eside ngangokunokwenzeka, kungcono ukuba ukhethe igobolondo Ceramic nge isiketi ezenziwe ngensimbi noma insimbi engagqwali. Ngesikhathi esifanayo kufanele ugweme ukuthenga cartridges zensimbi umbala ophuzi, okuyinto ejwayelekile imininingwane okungenani isikhathi eside futhi okungezona onensika anodized aluminium.
Engeziwe izinga LED ama E14
Isibani LED E14 (ikhandlela) libhekene iqoqo izici umsebenzisi ezengeziwe. Phakathi kwabo kuyafaneleka:
the ningi NEMPUMELELO NGAPHAKATHI ukugeleza ugesi kanye ukusetshenziswa yayo ongaphakeme;
ukuzimela cishe ephelele operation kahle amathonsi namandla yokwanda kwama;
imvamisa eliphezulu kakhulu ukumelana ukushintsha ngaphakathi nangaphandle kwe;
nokuvikelwa uma umonakalo mechanical vibration;
Negesi hob: Okufanele ukwazi
Ingubo Electric: izinzuzo kanye nemithetho yokusetshenziswa
Lokho kuletha iphunga ikati umchamo: wendabuko zokupheka kanye nezimali ezithengiwe
Slicer: ukuthi kuyini nokuthi kungaba?
Kwesihenqo LED - umhlobiso yesimanje nokuphepha ukukhanyisa
Fishbowl - ikakhulukazi ukunakekelwa nokugcinwa esimweni izinhlanzi
Amathiphu Wabasaqalayo: Indlela ukwakha kubha ovundlile
Ukuhlaziya ISIZA - kuyini? Izinkomba kanye rate
Biokap. Izinwele udayi, ukubuyekezwa kanye nencazelo
Amaqembu Igazi Human
Kutholwa amafayela ezilimele Windows 7: isinyathelo ngesinyathelo imiyalelo, izinhlelo kanye nezincomo
Isifo sofuba: Ukutheleleka umzila. Yamaphaphu sofuba: izimpawu nezindlela ukutheleleka
I-mastic "Giperdesmo". Ungangenisi amanzi "Giperdesmo": yokusetshenziswa
Amabhayisikili Giant: kwebalingisi, ukuhlolwa, Izibuyekezo
Inkampani "Insurance Insurance Yurophu": izinhlobo zomshuwalense, ukubuyekezwa
Gloxinia: nozonakekela ekhaya?
Game League of Legends: Umhlahlandlela "Le Blanc". Hyde iqhawe LeBlanc (Le Blanc): incazelo kanye nokuncoma
Kanjani ukuze uthole Zhukovsky eMoscow